यी हुन् मासुबाट भन्दा दोब्बर प्रोटिन पाइने ड्राइफुडहरु, नछुटाई खाएमा हुने फाइदाहरु । – Yuwa Aawaj
बैसाख १०, २०७८ शुक्रबार 589
काठमाडौँ : अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभ’र्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रि’सर्च अग्रोनो’मिकका शोध’कर्ताहरूले गरेको एक अनुसन्धा’नले मासुले भन्दा धेरै
ड्राइ फ्रु’बट्स तथा बीउबिजन बाट दोब्बर तेब्बर प्रोटिन पाइने बताएका छन् । ८१ हजार मानिसहरुमा गरेको अनु’सन्धानबाट मासुले मुटुको ख’तरा बढाउने भएकाले स्वास्थयको लागि मासु भन्दा फलफुल राम्रो रहेको बताए ।
मासुजन्य प्रोटिन उपभोग गर्नेहरुमा ६० प्रतिशत मुटु रोगको खतर रहेको र ड्राइ फ्रु’टजन्य प्रोटिन सेवन
गर्नेमा ४० प्रतिशत कम देखिएको छ । हरौँ केके हुन् ती चिजहरु जसबाट मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन पाइन्छ ।
देशी बदाम :प¥र्याप्त मात्रामा प्रोटि’नजन्य फाइबर पाइने भएकाले क्याल्सियम, एन्टि’अक्सि’डेन्ट तथा भिटामीन् ई पाइन्छ । देशी बदाम खाने गर्नाले दाँत हड्डी समेत बलियो हुन्छ । अत्याधिक मात्रामा फइबर हुने भएकाले मुटुको लागि निकै राम्रो मानिन्छ ।
काजु :थोरै चिजमा धेरै थरिका तत्वहरु पाइने भएकाले काजुलाई ड्राइ फुडको राजा भनिएको हो । यसमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन के भिटा’मिन बी ६ पाउनुको साथै काजुमा क्याल्सियम, आइरन, फोलेट तथा जिंक पनि प¥र्याप्त पाइन्छ ।
पेस्ता :स्वास्थयको लागि निकै फाइदाजनक मानिएको पेस्तामा प्रोटिनका साथै म्याग्ने’सियम, कपर, फोस्फो’रस, भिटामिन बी र फाइबर पाइन्छ । यसको सेवन गर्नाले कोले’स्ट्रोल र ह’र्ट अ’ट्याक बाट बचाउँछ ।
बदाम :बदाममा दूध बराबरको प्रो’टिन पाइन्छ । बदाममा प्रोटिनको मात्रा बढी हुने भएकाले बदामले पाचन शक्ति समेत बढाउछ ।
ओखर :यसमा प्रोटिन, जिंक, भिटामिन ई, भिटामिन ए, फोलेट तथा फोस्फो’रस पाइन्छ । ओखरको सेवनले शरिरमा रगतको मात्रा बढाउनुको साथै कोलेस्ट्रो’ल कम गरेर मुटुरोग हुनबाट बचाउछ । जिंकले इन्फे’क्सन हुनबाट बचाउछ भने भिटामिन ईले क्यान्स’रबाछ बचाउछ । ओखरले मस्तिष्कको क्षमता बढाउनदेदि लिएर छालामा चकम ल्याउँछ ।
किसमिस :किसमिसको सेवनले रक्त निर्माणमा वृ’द्धि हुन्छ । नियमित सेवन गर्नाले वायु, पित्त तथा कफसम्बन्धी तीनै दोषको निवारण गर्छ । यसमा आइरन र प्रोटिन पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।
अन्जीर :यसमा प्रोटिको साथै क्या’ल्सियम एवं भिटामिन ए र बी पाइन्छ । यसको सेवन गर्नाले कब्जि’यत, एनिमिया, दम, सर्दी, कम्मरको दुखाइ, टाउको दुखाइ, था’इराइड पा’यल्स जस्ता रोग लाग्न दिँदैन् । यसले शरिरमा तागत बढाउँछ । -विगुल न्युज
Prevभारत सरकारद्वारा ३९ वटा एम्बुलेन्स र ६ वटा स्कुल बस उपहार स्वरुप प्रदान ।
Nextएसिडिटी वा पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने, यसरी अपनाउनुहो घरेलु उपचार बिधि !
बजेटको तयारी : कर्मचारीको तलब बढ्ने !
वैदेशिक रोजगार – वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्ति मेडिकल फेल भएर फर्किए के गर्ने ?